Xaad oo shaaciyey habkii loo qoray dhallinyarada loo qaaday Eritrea iyo tirada uu beel ahaan u damiintay - Caasimada Online
Home Warar Xaad oo shaaciyey habkii loo qoray dhallinyarada loo qaaday Eritrea iyo tirada...
Xaad oo shaaciyey habkii loo qoray dhallinyarada loo qaaday Eritrea iyo tirada uu beel ahaan u damiintay
Muqdisho (Caasimada Online) – Nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo kamid ah odayaasha wax ka qoray ciidamada Soomaaliya ee tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ayaa markii ugu horeysay ka hadlay arrintaan iyo halka loo sheegay in markii hore ciidamadaan loo qaadayo.
Nabadoonka oo la hadlay Idaacadda VOA ayaa qirtay inuu damiin ka ahaa 44 dhallinyaro oo kamid ah ciidamada ay hey’adda Nabad sugidda iyo Sirdoonka Qaranka u sheegtay in tababar ciidan loogu qaadayo dalka Turkiga.
Xaad ayaa sheegay in marki uu damiinta ka noqonayey dhallinyaradaan loo sheegay in loo soo tababari doono inay kamid noqdaan aas-aaska ciidanka Nabadsugidda Galmudug sida uu hadalka u dhigay inkastoo aysan jirin illi madax banaan oo arrintaan xaqiijiyey.
“Inta aan xusuusto illaa 44 Wiil oo dhallinyaro ah ayaan aruuriyey, waxa aan geeyey taliska Nabadsugidda xarun uu leeyahay oo lagu qoro dhallinyarada taas oo aan filayo in ay ku tiil degmada Shangaani, dhallinyaradaasi waxa ay ahaayeen qaybta ay ka heshay beesheyda hoose ee aan Nabaddoonka u ahay, balse waxa naloo sheegay oo keli ah waxa ay ahaayeen laba arrimood, kuwaas oo kala ah In lagu Asaasayo Nabadsugidda Galmudug iyo in lagu soo tababarayo Turkiga,” ayuu yiri Nabadoon Xaad.
Nabadoon Xaad ayaa meesha ka saaray in marnaba loo sheegay in ciidamadaan loo qaadayo dalka Eritrea oo ay hadda ku heysato nolol xumo iyo jirdil, iyadoo la sheegay in qaar ka tirsan ciidamadaas ay u geeriyoodeen jirdil loo geystay.
Habka loo diiwaangeliyey ayuu sheegay in Sawirada Dhallinyarada iyo Sawirkiisa iyo macluumaadka kale lagu dhejiyey xaashiyaha lagu diiwaangelinayey dhallinyarada.
Qaar kamid ah dhalinyarada loo qaaday Eritrea oo wareysi siiyey VOA ayaa ka sheekeyay xaalad nololeed oo aad u liidata oo ku haysata xeryaha lagu hayo, halka qaarkood ay ku dhinteen.
“Nolol bini’aadanimo ah kuma noolin, guryaha ayaa nalagu dhistaa, beeraha falnaa, tobabar waxaa noogu dambeysay bishii 9-aad, intaas wixii ka dambeysay waa nala adoonsadaa,” ayuu yiri mid kamid ah dhalinyarada.